Wararka Maanta: Axad, Nov 27, 2016-Mid ka mid ah murashaxiinta aqalka hoose ee Puntland kasoo gali lahaa oo soo saaray qoraal cabasho ah
Wararka Maanta- Axad, Nov 27, 2016
Mid ka mid ah murashaxiinta aqalka hoose ee Puntland kasoo gali lahaa oo soo saaray qoraal cabasho ah
Axad, Nofeembar 27, 2016 (HOL)-Dr. C/Raxmaan Maxamed Cabdi Xaashi oo ka mid ahaa murashaxiintii aqalka hoose ee Puntland kasoo gali lahaa ayaa qoraal cabasho ah soo saaray kaasoo uu uga cabanaayo in laga musuqmaasuqay hannaankii lagu soo dooran lahaa.
Qoraalka ayuu u gudbiyay guddiga xallinta khilaafaatka doorashooyinka dadban.
"Waxaan guddiga sharafta leh ee xallinta khilaafaadka u soo gudbinayaa caddaalad darro iyo is-hortaag lagu sameeyey hannaankii iyo waxqaybsigii ay ku heshiiyeen Beelaha Baha-Nugaaleed ee Dhulbahante xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo buuxiyey tallaabooyinkii loo dajiyey habraaca doorashada ee khuseeya xulidda xildhibaanada aqalka hoose 2016". Qoraalkii ayaa sidaa lagu xusay.
Sharuudaha habraaca tallaabooyinkaas doorashada ee khuseeya xulidda xildhibaanada aqalka hoose ee 2016 waxaa kujira, in la sameeyey wadatashi ballaadhan oo dadaal xoog leh loo galay in ay Beelaha Baha-Nugaaleed dhammaantood ay ka soo qayb-galaan; in loo qoondeeyey beelaha Xasan Ugaas, Cabdi Garaad (ama loo yaqan Qayaad) iyo Yaxye saddexda xubnood ee beelaha Baha- Nugaaleed ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaaanka Federaalka.
Ka dib markii loo gudbiyey go’aankii beelaha Guddiga Doorashada Dadban ee Dawlad goboleedka Puntland waxay beelaha siiyeen foomamkii lagu soo qorayay magacyada ergooyinka, waxaana loo buuxiyey si waafaqsan shuruudihii looga baahnaa waxaana saxiixay issimka Baha Nugaaleed ugu jira 135ka saxiixayaasha oday dhaqameedka.
Wuxuu intaa kadib sheegay in asagoo sharuudaha waafaqay hadana murashaxiintii uu ka midka ahaa ee Baha Nugaaleed hakad laga galiyay inay helaan waraaqihii looga baahnaa inay soo buuxiyaan murashaxiinta.
"Waxaan guddiga sharafta leh ee xallinta khilafaadka la socodsiinayaa ka dib markii aan buuxinay shuruudahaas kor ku xusan in guddiga doorashada dadban ee Puntland murashaxiintii aan ka mid ahaa ee Baha Nugaaleed hakad laga galiyey inay helaan waraaqihii looga baahnaa inay soo buuxiyaan murashaxiinta". Sidaa ayuu cabashada ku xusay Dr. C/Raxmaan Maxamed Cabdi Xaashi.
Marka laisku soo xoorsho, ayaa sababaha keenaya cabashadiisa waxaa kujira in warqadda summadeedu tahay: MWK/DPS/439/2016 uu 16/10/2016 Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland u diray guddiga doorashada dadban taasoo ciwaanka ujeedadeedu ahaa “Go’aan ka Gaarid Xubnaha Aqalka Hoose ee Baha-Nugaaleed iyo Axmed Garaad; in muddo ka dib markii Madaxweyne Ku Xigeenku ogaaday qoraalkiisu inuu xadgudub iyo faragelin ku yahay xeerka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalku uu dib u la noqday warqaddaas kor ku xusan; in intaa dabadeed guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee dawlad-goboleedka Puntland telefoon ku wargeliyey Madaxweynaha Puntland Md. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in xubintii loo qoondeeyey beesha Cabdi Garaad lagu bedelo beesha Khaalid; in Khaliif Aw Cali, Guddoomiyaha doorashada dadban ee Puntland la xiriiray Ugaas Saleebaan Ciise Nuur oo ah saxiixaha Baha Nugaaleed inuu yimaado xarunta guddiga si loogu sheego arrin khusaysa taas oo ah in Madaxweynaha Puntland gaaray go’aan ka duwan kii ay Baha Nugaaleed horay u gaareen; in guddoomiye Khaliif si cad ugu sheegay Ugaas Saleebaan Ciise Nur in beesha Cabdi Garaad uu madaxweynuhu ka qaaday qoondadii xildhibaanka ee loo cayimay laguna wareejiyo beesha Khaalid; in Ugaas Saleebaan Ciise si cad ugu sheegay guddoomiye khaliif in go’aanka telefoonka ee madaxweynaha ka yimid uu lid ku yahay go’aankii ay gaareen beelaha Baha Nugaaleed ee qaybsiga xubnaha aqalka hoose iyo hannaanka doorashada 2016 kaas oo awood siinaya qof ka mid ah 135ka oday dhaqameed oo keliya; in beesha Cabdi Garaad oo uu hogaaminayo wakiilka Garaad Cali Buraale Xasan (Jaamac Cabdiraxmaan Buraale), xildhibaanka beesha Cabdi Garaad ee Baarlamaanka Puntland, Wasiirkii hore Wasaaradda Caddaaladda ee Puntland Ismaciil Maxamed Warsame iyo labada murashax ee beesha Cabdifataax Maxamed Shire iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ay la kulmeen Guddiga Doorashada Dadban ee Puntland; in kulankaas guddoomiye Khaliif aw Cali uu si cad u sheegay inuu fulinayo go’aankii madaxweynaha uu beesha kaga qaaday xubintii xildhibaanimo uuna ku siiyey beesha Khaalid asagoo intaas ku sii daray guddoomiyuhu in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isku-bedelkaas samayn karo; in markii asaga Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi uu u sheegay guddoomiyaha guddiga in go’aanka madaxweynuhu uu xadgudub ku yahay xuquuqda ay beesha Cabdi Garaad u leedahay ka qaybgalka doorashada uuna xaq u leeyahay in guddigu murashax ahaan u siiyo foomkii murashaxiinta kale la siiyey oo uu aaminsan yahay in xubintan uu Ugaas Saleebaan Ciise oo ah qofka keliya ee awooddaas sharcigu siiyey uu u qoondeeyey beeshiisa (Cabdi Garaad) ka dib markii uu la tashaday issimada Baha Nugaaleed ay u caddaatay in guddoomiye Khaliif aqbalay go’aannkii ka yimid madaxweynaha ee beesha Cabdi Garaad xubintoodii looga qaaday sidaa darteedna aanu diyaar u ahayn inuu siiyo foomka murashaxnimada; iyo in ugu dambeyn uu ka codsaday guddoomiye Khaliif in uu siiyo qoraal sababaysan oo qeexaya asbaabta diidmada foomka codsigiisa maadama uu aaminsan yahay in beesha Cabdi Garaad ay xaq u leedahay xubinta loo qoondeeyey balse guddoomiye Khaliif aw Cali uusan codsigaa jawaab ka siin.
Sababaha uu u tirinaayo in ay ka dambeeyeen in laga hor istaago xaqiisa ka muwaadin ahaan iyo ka murashax ahaan ayaa waxaa kujira in madaxweyne Gaas iyo asagu ay murashaxiin madaxweyne wada ahaayeen sanadkii 2012; in madaxweyne Gaas taageersan yahay madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud sidaa darteedna murashaxiinta loo maleynayo in madaxweyne Xassan in mar kale lasoo doorto ay ka hortagaan oo dhan la diidan yahay inayba aqalka hoose ee baarlamaanka federaaliga ah kuraas ka helaan.
Dr. C/Raxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ayaa ah aqoonyahan ku takhasusay culuumta dhaqaalaha wuxuuna PhD ka heystaa culuumtaa wuxuuna muddo ka badan 15 sano usoo shaqeeyay Baanka Aduunka ee World Bank asagoo sidoo kalena shirkado kale oo muhiim ah kasoo shaqeeyay.
Aabihii Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu ka mid ahaa dadkii 1998 aasaasay dawlad goboleedka Puntland asagoo madaxweyne ku-xigeen ka noqday Puntland.
Markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistee C/Laahi Yuusuf loo doortay xilka madaxweyne ee Soomaaliya, aabihii Maxamed Cabdi Xaashi wuxuu noqday madaxweynaha Puntland.
Hadaba, Dr. C/Raxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ayaa Guddiga Xallinta Khilaafaadka si xushmad leh uga codsanaya in uu wax ka qabto fargelinta iyo cadaalad darada uu sheegay in madaxda u saraysa dawlad goboleedka Puntland iyo guddiga doorashada dadban ee Puntland oo uu sheegay in ay lumiyeen doorka madax bannaanida ee laga filayay ay ku hayaan beesha Cabdi Garaad.
LIFAAQYO Cabashadu kujirto hoos ka eega fadlan:
KU : Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashada Dadban ee Dawladda
OG : Guddiga Doorashada Dadban Federaalka 2016
OG: Guddiga Doorashada Dadban ee Dawlad-goboleedka Puntland
UJEEDDO : Cabasho - Xadgudub Murashax Aqalka Hoose ee
Waxaan guddiga sharafta leh ee xallinta khilaafaadka u soo gudbinayaa caddaalad darro iyo is-hortaag lagu sameeyey hannaankii iyo waxqaybsigii ay ku heshiiyeen Beelaha Baha-Nugaaleed ee Dhulbahante xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka kuwaas oo buuxiyey tallaabooyinkii loo dajiyey habraaca doorashada ee khusaysa xulidda xildhibaanada aqalka hoose 2016.
Tallaabooyinkaas waxa ka mid ah:
Waxaa la sameeyey wadatashi ballaadhan oo dadaal xoog leh loo galay in ay Beelaha Baha-Nugaaleed dhammaantood ay ka soo qayb-galaan (Eeg Lifaaqa 1aad).
Waxaa loo qoondeeyey beelaha Xasan Ugaas, Cabdi Garaad (ama loo yaqan Qayaad) iyo Yaxye saddexda xubnood ee beelaha Baha- Nugaaleed ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaaanka Federaalka (Eeg Lifaaqa 2aad).
Ka dib markii loo gudbiyey go’aankii beelaha Guddiga Doorashada Dadban ee Dawlad goboleedka Puntland waxay beelaha siiyeen foomamkii lagu soo qorayey magacyada ergooyinka, waxaana loo buuxiyey si waafaqsan shuruudihii looga baahnaa waxaana saxiixay issimka Baha Nugaaleed ugu jira 135ka saxiixayaasha oday dhaqameedka .
Waxaan guddiga sharafta leh ee xallinta khilafaadka la socodsiinayaa ka dib markii aan buuxinay shuruudahaas kor ku xusan in guddiga doorashada dadban ee Puntland murashixiintii aan ka mid ahaa ee Baha Nugaaleed hakad laga galiyey inay helaan waraaqihii looga baahnaa inay soo buuxiyaan murashaxiintu.
SABABAHA KEENAY CABASHADAYDA :
Waxa ka mid warqadda summaddedeedu tahay Ref: MWK/DPS/439/2016,
16/10/2016 ee Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland oo u diray guddiga doorashada dadban oo ciwaanka ujeedadeedu ahayd “Go’aan ka Gaarid Xubnaha Aqalka Hoose ee Baha-Nugaaleed iyo Axmed Garaad.” (Eeg Lifaaqa 3aad)
Mudo ka dib markii Madaxweyne Ku Xigeenku ogaaday qoraalkiisu inuu xadgudub iyo faragelin ku yahay xeerka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalku ayuu dib u la noqday warqaddaas kor ku xusan.
Intaa dabadeed waxaa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee dawlad-goboleedka Puntland telefoon ku wargeliyey Madaxweynaha Puntland Md. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas in xubintii loo qoondeeyey beesha Cabdi Garaad lagu bedelo beesha Khaalid.
Waxaa Khaliif Aw Cali, Guddoomiyaha doorashada dadban ee Puntland la xiriiray Ugaas Saleebaan Ciise Nuur oo ah saxiixaha Baha Nugaaleed inuu yimaado xarunta guddiga si loogu sheego arrin khusaysa taas oo ah in Madaxweynaha Puntland gaaray go’aan ka duwan kii ay Baha Nugaaleed hore u gaareen .
Wuxuu guddoomiye Khaliif si cad ugu sheegay Ugaas Saleebaan Ciise Nur in beesha Cabdi Garaad uu madaxweynuhu ka qaaday qoondadii xildhibaanka ee loo cayimay laguna wareejiyo beesha Khaalid.
Wuxuu Ugaas Saleebaan Ciise si cad ugu sheegay guddoomiye khaliif in go’aanka telefoonka ee madaxweynaha ka yimid uu lid ku yahay go’aankii ay gaareen beelaha Baha Nugaaleed ee qaybsiga xubnaha aqalka hoose iyo hannaanka doorashada 2016 kaas oo awood siinaya qof ka mid ah 135ka
oday dhaqameed oo keliya.
Waxa beesha Cabdi Garaad oo uu hogaaminayo wakiilka Garaad Cali Buraale Xasan (Jaamac Cabdiraxmaan Buraale), xildhibaanka beesha Cabdi Garaad ee Baarlamaanka Puntland, Wasiirkii hore Wasaaradda Caddaaladda ee Puntland Ismacil Maxamed Warsame iyo labada murashax ee beesha Cabdifataax Maxamed Shire iyo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi ay la kulmeen Guddiga Doorashada Dadban ee Puntland.
Kulankaas guddoomiye Khaliif aw Cali wuxuu si cad noogu sheegay inuu fulinayo go’aankii madaxweynaha uu beesha kaga qaaday xubintii xildhibaanimo uuna ku siiyey beesha Khaalid . Wuxuu intaas ku sii daray guddoomiyuhu in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu isku-bedelkaas samayn karo.
Anigoo ah Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi waxaan guddoomiyaha guddiga u sheegay in go’aanka madaxweynuhu uu xadgudub ku yahay xuquuqda ay beesha Cabdi Garaad u leedahay ka qaybgalka doorashada. Waxa aan intaa ku daray in aan xaq u leeyahay in guddigu murashax ahaan i siiyo foomkii murashixiinta kale la siiyey oo aan aaminsanahay in xubintan uu Ugaas Saleebaan Ciise oo ah qofka keliya ee awooddaas sharcigu siiyey uu u qoondeeyey beeshayda (Cabdi Garaad) ka dib markii uu la tashaday issimada Baha Nugaaleed.
Ka dib waxa noo caddaatay in guddoomiye Khaliif aqbalay go’aannkii ka yimid madaxweynaha ee beesha Cabdi Garaad xubintoodii looga qaaday sidaa darteedna aanu diyaar u ahayn inuu isiiyo foomka murashaxnimada.
Ugu dambayn, waxaan ka codsaday guddoomiye Khaliif in uu i siiyo qoraal sababaysan oo qeexaya asbaabta diidmada foomka codsigayga madama aan aaminsanahay in beesha Cabdi Garad ay xaq u leedahay xubinta loo qoondeeyey sidaa darteedna aan guddoomiyaha uga codsaday inuu qoraal igu siiyo asbaabta diiddmada foomka murashaxa. Guddoomiye Khaliif aw Cali codsigaygii jawaab igama siin.
Sidaa darteed, waxaan Gudiga Xallinta Khilaafaadka si xushmad leh uga codsanayaa in ay soo dhex galaan fargelinta iyo cadaalad darada ay madaxda u saraysa dawlad goboleedka Puntland iyo guddiga doorashada dadban ee Puntland oo lumiyey doorka madax bannaanida ee laga filayey ay ku hayaan beesha Cabdi Garad.
Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi
Lifaaqa 1aad : Shirarkii is-dabajooga ah ee lagaga tashanayey go’aan ka gaarista xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka
Lifaaqa 2aad : Go’aan ka gaarid xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka beelaha Baha Nugaaleed ku yeelan doonan 2016
Lifaaqa 3aad : Warqadi Madaxweyne Ku Xigeenka Puntland u diray Guddiga
Doorashada Dadban ee Dawlad Goboleedka Puntland
Lifaaqa 4aad : Foomka Odey Dhaqameedka ee Guddiga Dowlad Goboleedka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD) ee Puntland siisey beesha Cabdi Garad in ay soo buuxiso.
Lifaaqa 5aad : Liiska Ergooyinka Doorashada ee Guddiga Dowlad Goboleedka Hirgelinta Doorashooyinka Dadban (GDGHDD) ee Puntand siisey beesha Cabdi Garad in ay soo buuxiso.
Ciidammada booliiska Uganda oo xabsiga dhigay Boqorka Rwenzururu
11/27/2016 2:31 PM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) - Wararka ka imanaya dalka Uganda, ayaa sheegaya in ciidammada booliiska galbeedka dalka xabsiga u taxaabeen boqor Rwenzururu, kaddib dagaal ay ku dhinteen in ka badan 56 ruux oo dhaxmaray ciidammada Uganda iyo maleeshiyaad la sheegay in u daacad ahaayeen boqorka.
Akhriso magacyada xildhibaanadii maanta ku soo baxay doorashada xubnaha aqalka hoose ee ka dhacda Jowhar
11/27/2016 12:06 PM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) - Doorashada xubnaha aqalka hoose oo wali ka socta magaalada Jowhar ee xarunta dowlad gobolleedka Hirshabeelle ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaanno aan horay ugu tirsaneyn baarlamaanka,iyadoo laga guuleystay mudanayaal hore.
Galmudug oo soo jeedisay in la badallo guddoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka heer dowlad gobolleed
11/27/2016 9:12 AM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) - Maamulka gobolleedka Galmudug ayaa qoraal ka soo baxay maanta waxaa ay ku dalbadeen in la badallo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka heer dowlad gobolleedka ee Galmudug.
SAWIRRO: Taariikh Nololeedkii FIEDAL Castro oo dalka Cuba xukumayay in ka badan Nus-qarni
11/27/2016 8:31 AM EST
Axad, November 27, 2016 (HOL) — Fidel Castro, ayaa Waddanka Cuba Hoggaaminayay muddo Nus-qarni ah, iyadoo xisbigiisa oo keliya uu waddankas ka talinayay. xilligaasoo uu Calanka Casrto ee Guduudka ah ka Ag-babanayay Dalka Mareykanka oo ahaa Cadowgiisa ugu weyn.
Dagaal ka dhacay Uganda oo lagu dilay in ka badan 55 Ruux oo ay ku jiraan in ka badan 10 Askari
11/27/2016 8:12 AM EST
Axad, November 27, 2016 (HOL) — Ugu yaraan 55-ruux, ayaa lagu dilay iska-horimaad dhexmaray ciidamada booliiska Uganda iyo koox doonaysay inay sameysato Jamhuuriyad u gaar ah, sida uu sheegay afhayeenka Booliiska dalka Uganda.
Dowladda Uganda oo ciidammo dheeraad ah u soo direysa Soomaaliya
11/27/2016 6:20 AM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) -Dowladda Uganda ayaa sheegtay in ay Soomaaliya u soo dirayso in ka badan 2,000 oo askari oo dheeraad ah,, kuwaa oo qeyb ka noqon doona howlgalka midowga Africa AMISOM.
Sidii Castro uu u saaciday dagaalkii ka dhanka ahaa midab kala sooca Afrika
11/27/2016 5:44 AM EST
Axad, Nofeembar 27, 2016 (HOL)-Fidel Castro, waa madaxweynihii hore ee Cuba ee shuuciga ahaa ee Sabtidii shalay geeriyooday.
Xildhibaannada iyo Waxgaradka kasoo jeeda Gobollada Waqooyi oo Fara-gelin ka Cabanaya
11/27/2016 4:50 AM EST
Axad, November 27, 2016 (HOL) — Xildhibaanno iyo Waxgaradka kasoo jeeda gobollada Waqooyiga Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan ayaa Bayaan ay soo Saareen, ku sheegay in lagu hayo fara-gelin dhanka doorashada sannadkan ah.
Xoogagga Al-shabaab oo Weerar ku qaaday Saldhigga ciidanka millateriga ee Laanta-buuro
11/27/2016 2:56 AM EST
Axad, November 27, 2016 (HOL) — Xoogag taabacsan Al-shabaab ayaa ku qaadday xalay Weerar Saldhig ay Ciidamada Dowladda Somalia ku leedahay Deegaanka Laanta-buuro ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Guddiga doorashada oo markii ugu horeysay joojiyay natiijada labo xildhibaan oo shalay lagu doortay Jowhar
11/27/2016 2:38 AM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) -War qoraal ah oo ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal ayaa markii ugu horeysay leysku hor taagay natiijada doorashada labo xildhibaan oo maalintii shalay lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka gobolleedka Hirshabeelle.
Kulliyad cusub oo laga dhex furay Jaamacada Ummada
11/27/2016 2:31 AM EST
Axad, Nofeembar 27, 2016 (HOL)-Kulliyad cusub [waa Kulliyadda Sayniska iyo Tiknoolojiyadda] ayaa laga dhex furay Jaamacada Ummada ee Muqdisho.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo qiray in qaladaad ka dhaceen doorashooyinka aqalka hoose ee dalka
11/27/2016 2:04 AM EST
Axad, November, 27, 2016 (HOL) - Madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo Xassan Sheekh Max'uud oo markii ugu horeysay ka hadlay cabashada ka jirta doorashada aqalka hoose, ayaa sheegay in uu qirayo in qaladaad ay dhaceen, laakiin yihiin kuwo aad u yar.
Bandhig kusaabsan dhaqanka Soomaalida iyo dhaqamo kale oo ka dhacay Nairobi Kenya
11/27/2016 12:28 AM EST
Axad, Nofeembar 27, 2016 (HOL)-Ururka Eastleighwood oo ka shaqeeya xaafada Eastleigh ee magaalada Nairobi kana shaqeeya arimaha wacyi galinta, dhaqanka, farshaxanka, is dhexgalka, jiheynta dhalinyarada iyo barnaamijyada tababarada ayaa shalay qabtay bandhig lagu soo bandhigayay dhaqan Soomaaliga iyo dhaqamada bulshooyinka kale ee Kenya ku dhaqan.
Nairobi airport closed temporarily after plane makes emergency landing -Reuters
11/27/2016 1:23 PM EST
Nov 27 A plane from Somalia landed on its belly and veered off the runway at Nairobi's international airport on Sunday, causing no casualties but prompting the authorities to temporarily close the runway.
Jubilee is diverting attention on corruption by attacking counties - Governor Abdullahi -The Star
11/27/2016 1:06 PM EST
Wajir Governor Ahmed Abdullahi has slammed the Jubilee administration for diverting the country's attention by trying to attack Cord counties over corruption.
Four survive after aircraft crash-lands at JKIA -Daily Nation
11/27/2016 12:51 PM EST
Kenya Airports Authority has temporarily closed Jomo Kenyatta International Airport's (JKIA) runway after an aircraft from Somalia crash-landed.
Hundreds miss KCSE at Dadaab over repatriation -Daily Nation
11/27/2016 7:56 AM EST
At least 145 out of 1148 candidates registered for this year’s Kenya Certificate of Secondary School (KCSE) in Dadaab refugee camp missed the examinations due to the ongoing repatriation.
EU Stands by Somalian Gov't, Defies 'Senseless Violence' After New Bombing -Sputnik News
11/27/2016 7:49 AM EST
A huge blast rocked a vegetable market in the Eastern African country on Saturday, killing at least 11 and wounding scores of others as the Eastern African nation is voting in a government and parliamentary election.
Stockholm mosque desecrated by swastikas, anti-Muslim slogans -RT
11/27/2016 3:45 AM EST
Unidentified hooligans made their way into a mosque in Stockholm, Sweden on Saturday morning, throwing fire crackers and painting swastikas and anti-Muslim slogans on the walls.
3 California Mosques Receive Letters Threatening Muslims -AP
11/27/2016 3:17 AM EST
Fidel Castro Left Mark on Somalia, Horn of Africa -VOA
11/27/2016 3:12 AM EST
Uganda says army’s salary arrears ‘ready’ -alleastafrica
11/27/2016 2:50 AM EST
Clinton team to take part in U.S. state vote recount, Trump blasts effort -Reuters
11/27/2016 2:43 AM EST
Somalia’s young entrepreneurs are finding their way in the new global economy -Quartz
11/27/2016 1:30 AM EST
Blind Somali math teacher adding to his legacy in Minneapolis -Star Tribune
11/27/2016 1:09 AM EST
Somali-American Competes in Hijab and Burkini for Minnesota Beauty Pageant -Yahoo Beauty
11/27/2016 1:02 AM EST
Castro played important role in fighting colonialism and apartheid in Africa -Daily Nation
11/27/2016 12:38 AM EST